IMIBUZO ENGAMA-20 EYONWABISAYO YOKWAZI UMNTU-ULUHLU KUPHELA OLUDINGAYO - INDLELA YOKUPHILA
Imibuzo engama-20 eyonwabisayo yokwazi uMntu-uLuhlu kuphela oludingayo
Ukuhamba udlule kwinqanaba lokwazana nokwazi umntu okwinqanaba elinzulu kufuna ukumba nzulu kubomi babo usebenzisa imibuzo.
Kodwa hayi nje naluphi na uhlobo lombuzo.
Imibuzo efuna u-ewe okanye u-hayi olula ayiyi kuyisika loo nto. Kuya kufuneka ubuze imibuzo evulelekileyo evumela omnye umntu ukuba avule kwaye acacise ngakumbi.
Gcina ukhumbule ukuba awufuni omnye umntu azive ukuba uphantsi kolunye uhlobo lokubuza. Nangona ufuna ukubuza imibuzo malunga nezihloko ezityhila amaphupha omnye umntu, iinjongo, kunye neengcinga ngokubanzi, imibuzo yakho akufuneki ifane nodliwanondlebe olusemthethweni.
Ulonwabo kufuneka lube lilizwi lakho lokujonga.
Nayi imibuzo engama-20 eyonwabisayo yokwazi umntu.
Imibuzo malunga nokuthandwa
Indawo efanelekileyo yokuqala kukufumanisa malunga nokukhethwa komnye umntu. Kuhlala kubhetele ukuba ubuza imibuzo elandelayo ezakwenza ukuba incoko yakho ihambe ngokwendalo. Umzekelo, ukuba ufumanisa ukuba bayazithanda iintaka, kuya kufuneka uye kwelinye inyathelo ukubuza ukuba zeziphi iintlobo zeentaka abazithanda kakhulu okanye zeziphi iintaka ezizibambe kakhulu.
Ngomonde omncinci (kuba awufuni kuza ngathi unyanzelekile), uya kusiba ngcono ukuba uqhelane nomnye umntu kwaye ukhule usondele kubo ngexesha elifutshane. Isitshixo kukugcina izinto zikhaphukhaphu kwaye zinomdla ukuze iincoko zinganyanzelwa. Ufuna ukuhamba ngokwendalo ekwabelaneni ngamabali abo kunye.
Eminye imibuzo emnandi malunga nokuthandwa okanye izinto onokukhetha kuzo ukuba wazi umntu ngcono zibandakanya:
1. Ungene njani kwizinto ozithandayo?
Izinto zokuzonwabisa zihlala zizinto abantu abathanda ukuzenza, nto leyo eyenza ukuba kube sisihloko ekulula ukuba bathethe ngaso.
Xa ubuza lo mbuzo, wenza izinto ezimbini ngokufanelekileyo:
Ubeka ithowuni yencoko emnandi
Uvumela umntu ukuba abelane ngebali lakhe endaweni yokuba benze izinto abazithandayo
Ukubuza ukuba yeyiphi into oyithandayo oyithandayo kulungile, nayo, kodwa inokufuna imibuzo emininzi yokulandelelana ukuze ufumane omnye umntu ukuba atyhile izinto ngaye.
Kodwa xa ubuza ukuba bangene njani kule nto bayithandayo, uvula amasango ezinto abanomdla kuzo, ezinokubenza baqhubeke kwaye baqhubeke malunga nemiba eyahlukeneyo yobomi babo ongakhange ubuze yona ngqo.
2. Yiyiphi loo ncwadi enye ongayi kudinwa kukufunda?
Iincwadi esizifundileyo zinokuba nefuthe elibonakalayo kwiimbono zethu, iinjongo zethu, nakwixabiso lethu. Ukuba uyayazi into umntu akuthandayo ukufunda, uya kuba nakho ukwenza ingqiqo yenkqubo yexabiso labo.
Umbuzo olungileyo wokulandela kule iya kuba yinto ethile kwimigca, Ke, ngaba sikhona isizathu esithile osithandayo X uhlobo lweencwadi ukuya KUNYE ?
Ukuba uyeka ukubuza malunga neencwadi zabo abazithandayo, loo mpendulo iyodwa ayinakukunika umbono ocacileyo wohlobo lweencwadi abakuthandayo ukufunda. Ukuze umazi ngcono umntu, kuya kufuneka uphonononge ngokuthe kratya ukuze wazi ukuba yeyiphi ingqokelela yeencwadi ezimise uluvo lwabo ngokubanzi.
Ukuba uyiphatha kakuhle le nto, awuzukuyonwabela incoko etyebileyo malunga neencwadi ozithandayo, kodwa malunga nababhali, iingcinga, kwaye uninzi lwazo zonke, ubuya kubazi kancinci kunangaphambili.
3. Ukuba ubunokungxamela ukubukela inkqubo yeTV, ibiya kuba yintoni?
izimvo ezilula ze tattoo zabaqalayo
Lo mbuzo uya kukunceda ukuba wazi umntu ngcono nangakumbi ngendlela efanayo neencwadi zabo abazithandayo, ngakumbi ukuba umbe nzulu ukuze wazi ukuba ngabaphi abalinganiswa abakumdlalo weTV obathandayo.
Uninzi lwabantu luthanda abalinganiswa abaziintsomi ababonakalisa uphawu abaluthandayo nababathiyileyo okanye abangabathandiyo abalinganiswa ababaliweyo abayimizekelo yento abangayithandiyo.
Ngaba uyabona ngoku ukuba ukumba ngokunzulu kunokubonisa oko omnye umntu akuthandayo nangakuthandiyo? Ukuba ubuze umbuzo kuphela ungakhange uvule indawo ezingena kwiimpendulo zabo ukwenza eminye imibuzo, awunakufumana mfanekiso ocacileyo wento abayithandayo.
4. Zeziphi iiholide olangazelela ukuzijonga, yaye ngoba?
Le yindlela elungileyo yokwazi umntu kwinqanaba lobuqu njengoko umbuzo ubavumela ukuba bachaze umbono wabo wokuzonwabisa.
Nokuba nguSuku loNyaka oMtsha, iKrisimesi, uMbulelo, uSuku lweNkululeko, okanye nayiphi na enye iholide, inqanaba lokonwaba eliya ekulungiseleleni linokukuxelela okuninzi malunga nenkqubo yexabiso lomntu.
Ungalibali ukongeza isizathu sokuba inxenye yombuzo, kuba eso sisithako esiyimfihlo esiya kwenza ukuba omnye umntu abelane nawe ngobomi bakho buqu.
Ukuba uyabuza, Yeyiphi iholide yakho oyithandayo? kufana nombuzo ophelileyo. Impendulo ihlala ithe tye kwaye iphelisa incoko ngaphambi kokuba iqale. Kodwa ukuyiyila njengoko kuchaziwe apha ngasentla kuyenza ibe yimbuzo evulelekileyo evumela umntu ukuba angene kwiinkcukacha ezininzi.
Uhlobo lohlobo: Kungcono ukuyeka (ubuncinci okwangoku) nje ukuba uqaphele ukuba omnye umntu uphulukene nomdla wokuphendula imibuzo yakho, okanye uqhubeke nengxoxo. Ukunyanzelwa ukuba baphendule imibuzo kunokubenza bazifihle izinto kuwe kwaye kunokukhokelela ekubeni bakucaphukele.
Imibuzo eyonwabisayo yokwazi intombazana
Nika ingqalelo apha, bafana!
Nazi imibuzo emininzi ukubuza intombazana ukusukela kwi-flirty ukuya kwimibuzo enomdla kwaye enzulu. Kodwa ukuba ufuna nje ukwazi intombazana ngaphandle kwentambo eziqhotyoshelweyo (ekuqaleni), kungcono ukuyibuza imibuzo eyonwabisayo kunye neqhelekileyo.
Kodwa musa ukwenza iimpazamo; iimpendulo zakhe zinokubonelela ngombono onzulu ukuba ungubani, uthanda ntoni, kwaye ulindele ntoni kwiqabane. Nika ingqalelo kwiimpendulo zakhe.
Nangona kunjalo, gcina izinto zikhanya. Awufuni ukuba acinge ukuba uphantsi koqwalaselo. Zininzi izinto intombazana enokuyifumana inomtsalane kwindoda; ukwenza udliwanondlebe naye ngokuqinisekileyo ayinguye omnye wabo (ngaphandle kokuba, kunjalo, ufuna umsebenzi).
Khumbula ukuba ezi zimele ukuba ziyimibuzo eyonwabisayo yokwazi umntu othile, ke zibuze ngendlela ehlekisayo kangangoko.
Nantsi imibuzo emnandi uninzi lwamantombazana olungayi kuthandabuza ukuyiphendula, enokukunceda ubazi ngcono.
5. Yintoni osakonwabelayo ukuyenza nangona sowuyigqithile?
Lindela iimpendulo ezintle nezimnandi apha.
Kodwa injongo ayisiyokumhlekisa nje. Endaweni yoko, kukuba amenze athethe ngezinto azithandayo, nokuba sele emdala kakhulu ukuba angazenza.
Ukuba unengxaki yokuqalisa incoko okanye ufumana imibuzo efanelekileyo yokubuza intombazana, mhlawumbi le inokuba yile nto uyifunayo.
6. Yeyiphi into ekhawulezileyo oyenzileyo kutshanje?
Lo ngumbuzo olungileyo ekuvumela ukuba uthathe ujongo olukhawulezileyo kwindlela yokuphila yentombazana?
Ngaba unomdla okanye ukhetha yonke into ecwangcisiweyo ngaphandle kwegumbi elincinci lezimanga? Ngaba ingumntu onokuhamba ngokulula ngokuhamba komzuzu, okanye umntu ocinga amanyathelo alishumi phambili?
Ngelixa kunokuba nzima ukwenza ngokuchanekileyo uluvo oluvela kuye kwimpendulo enye, ungabuza imibuzo yokulandela ngokuxhomekeke kwimpendulo yakhe kwaye uthathe izinto ukuya kwingxoxo enzulu.
7. Ukuba ubunamandla okukhetha ishumi leminyaka ukuba uzalelwe phi, ibiya kuba yeyiphi iminyaka elishumi kwaye ngoba?
Impendulo koku inokukuxelela okuninzi malunga nefashoni yakhe, uhlobo lomculo, kunye nembono yakhe ngokubanzi malunga ne-glitz kunye nobukhazikhazi.
Kungenxa yoko le nto inxenye yombuzo isebenza njengeyona ndlela inkulu yokuqalisa incoko kuba iya kumvumela ukuba athethe ngaphezulu kwexesha nje kwimbali ayithandayo kodwa izizathu azikhethayo.
Kwaye izizathu zakhe ziya kukuxelela ukuba loluphi uhlobo lomntu alumkileyo-ngobulumko.
8. Ukuba kufuneka utshate umntu omnye oyintsomi, inokuba ngubani?
Kwaye mhlawumbi ujijise intloko yakhe ukuba acinge okwethutyana ngaphambi kokuba aphendule.
Nokuba uphendula athini, uya kuba nakho ukufumanisa ukuba ujonge ntoni kwiqabane lakhe. Amantombazana amaninzi acinga ngeyona ndoda ifanelekileyo ifana nentsomi oyindoda abeze kuyithanda.
Kwiimeko ezininzi, kunokuba nzima ukuphina ukukhetha kwakhe kumlinganiswa omnye wobudoda oyintsomi. Kungenxa yokuba uthanda ezinye iimpawu kubalinganiswa abohlukeneyo kwaye unethemba lokuba indoda yakhe yamaphupha iya kudibanisa uninzi, ukuba ayingabo bonke, kubo.
Ewe, ukuba unethemba lokwakha ubudlelwane naye, ubuncinci impendulo yakhe iya kukunika umkhondo kwinto ayilindeleyo kuwe, kwaye uhambe inyathelo elingaphaya ukuze umazi ngcono.
Nantsi into oyithethayo, nangona kunjalo. Le ayisiyiyo ngqo inzululwazi. Nangona kunjalo, lithuba lokuba impendulo yakhe iya kukunika umbono wento ayithembayo (kwinqanaba elithile) lokufumana uhlobo lwendoda yakhe.
Imibuzo yeBhonasi eyonwabisayo yokwazi uMntu-Intombazana ukuba ichaneke.
Masithi indlu yakho ibisitsha, ubuza kuthini?
Ukuba uziva uphantsi, yeyiphi into enokukwenza uzive ungcono ngephanyazo?
Ithini inamba yakho yokuqala enetyala?
Uhlobo lohlobo: Kulumkele imibuzo enokwenza ukuba omnye umntu azive ngathi wophula ubumfihlo, ngakumbi kwasekuqaleni kubudlelwane (nokuba ngugxa wakho, umhlobo, okanye iqabane elisondeleyo).
Imibuzo eyonwabisayo yokwazi uMfana
Ukufumana umfana ukuba aphendule imibuzo yakho kulula kuba uninzi lwabafana luyakonwabela ukuthetha ngeziqu zabo. Okumangalisayo kukuba, amadoda awathethi njengabafazi.
Kukho eneneni isifundo esibonisa ukuba abasetyhini baninzi ngeFoxp2, iprotein yolwimi, ebenza bathethe ngakumbi kwasekuqaleni. Ibango lokuba abantu basetyhini bayakwazi ukuthetha Amagama ayi-13,000 ngaphezulu kwamadoda yinke imihla!
Yindlela nje, nangona. Masibuyele kwimibuzo emyoli onokuyibuza umfana ukuba uyafuna nyani ukuba akuvulele.
Logama nje ungabuzi imibuzo esondeleyo, kungenzeka ukuba umazi umfana ngokukhawuleza.
Enye into ekufuneka uyigcinile engqondweni kukuba amadoda ngokubanzi alungile ekuhlukaniseni ubomi babo. Intsingiselo, bahlala begxila kwinto enye ngexesha.
Kutheni kubalulekile ukwazi oku? Ukuba umntu ugxile kwinto enye, awusoze umenze athethe ngenye into. Ke, qiniseka ukuba imibuzo yakho emnandi ihambelana nale nto ayenzayo ngalo mzuzu.
Oku kuchaza nokuba kutheni amadoda engathethi kakhulu-isihloko esinye asizenzekeli ngokuzenzekelayo kuyo yonke into enokubakho, njengoko kuqhelekile kuninzi lwabasetyhini. Abafana kunokwenzeka ukuba baphendule umbuzo ngokuthe ngqo ngaphandle kokuya kwezinye iindawo.
Jonga le mibuzo imnandi ukubuza nawuphi na umntu ongathanda ukwazi ngcono.
9. Bubuphi ubuchule obufihlakeleyo onabo?
Enye yeendlela ezikhawulezayo zokufumana umntu ukuba abelane ngokukhululekileyo ngolwazi lomntu kunye nawe kukubetha i-ego yakhe! Kwaye ndithetha ukuba ngendlela elungileyo.
Abantu bahlala benezinto ezimbalwa abanokuzenza kodwa abantu abaninzi abangazi nto ngazo. Kungenxa yoko le nto uninzi lwabantu luza konwaba kakhulu ngalo mbuzo (abanye baya kuba nemincili) kuba ibanika ithuba lokukuchukumisa ngezakhono zabo eziyimfihlo.
Lo mbuzo ukunika ukuqonda kwinto lo mntu anokuyenza kakuhle, nangona engavumeli abantu abaninzi ebomini bakhe bazi ngayo. Mhlawumbi abanye ababuxabisi ubuchule bakhe okanye ezinye izizathu.
Ukumbuza ukuba zeziphi izakhono zakhe eziyimfihlo, kumvumela ukuba avule inqanaba elitsha elingaziwa ngabantu abaninzi.
10. Leliphi elona khitshi lakho lihlekisayo lisilelayo?
Kulungile, ngoku le yinto ihlala ihlala ifumana umntu okuxelela okuninzi malunga neempazamo zakhe ngaphandle kokuziva ungonwabanga. Endaweni yoko, kunokwenzeka ukuba ahleke entliziyweni yakhe ngelixa esabelana nawe ekhitshini lakhe elibonakala lihlazo.
Nokuba ungumpheki olunge kangakanani, uninzi lwamadoda luye lwafumana amaxesha xa lusilele ngokuzama ukupheka isitya okanye ezimbini. Ke, qhubeka ubuze nokuba ungumpheki!
Ungawusebenzisa lo mbuzo ukubuza eminye imibuzo elandelayo enje:
Sesiphi esona sitya sihle owakha wasenza?
Ngaba ukhe wakucinga ukuba ngumpheki okanye uvula indawo yakho yokutyela? (Ukuba akanayo)
Ukuba ubunokutya ukutya kube kanye kuphela ubomi bakho bonke, ibingayintoni leyo? (Umnandi ngakumbi kunokuba ubuze okona kutya kukuthandayo?)
Khawukhumbule nje ukuba ungayidubuli yonke le mibuzo ngaxeshanye. Bayeke bageleze ngokwendalo ngexesha lencoko yakho, kwaye uqiniseke ngokubabuza ngendlela ebekekileyo.
11. Zeziphi izinto ezintathu ongenakuze usebenzise imali kuzo?
Le yindlela elungileyo yokufumanisa ukuba umntu uxabise ntoni kwaye ucinga ntoni njengenkunkuma iyonke. Ewe awumazi umntu ngokwaneleyo de ube uyazi amaxabiso abo.
12. Yiyiphi enye into abantu abangakholelwa ngayo ngawe?
Impendulo ethembekileyo kulo mbuzo ngokuqinisekileyo iya kufumanisa into ongazange wayazi ngalo mntu.
Ungayihluka ngokubuza, Ngaba ikhona into ngawe endingayikholelwayo ukuba andiyivanga ngqo kuwe?
Injongo kukwenza ukuba omnye umntu embe nzulu kwaye atyhile into enye okanye ezingakumbi malunga nabo ezingaziwayo.
Uhlobo lohlobo: Kungcono ucime izihloko ezinokuphikisana, ezinje ngemibono yezopolitiko kunye nemibuzo esekwe kwinkolo, ngakumbi xa usazi umfana nje. Linda ude umazi umntu kakuhle ngaphambi kokuba ubuze, Ngaba uyiRiphabhlikhi okanye iDemokhrasi? Ngaba ungumntu okholwayo okanye okomoya? okanye ziphi iinkolelo zokomoya ozibhalisayo? Amadoda amaninzi anokuthanda kakhulu izimvo zawo zopolitiko. Ukuba uthetha into ngokuchasene nokuzibandakanya kwabo ekuqaleni kobuhlobo, unokubeka emngciphekweni amathuba akho okuhlangana nabo.
Imibuzo engaqhelekanga yokuNwaba ukuze umazi umntu othile
Imibuzo engahleliwe iyindlela elungileyo yokwazi umntu ngcono, nokuba ngoogxa bakho emsebenzini okanye umntu ofunda naye esikolweni ufuna ukwazi ngcono.
Le mibuzo ihlala iphuma ebhlowu, ke yenza ukuba omnye umntu anqumame kwaye acinge ngaphambi kokuba aphendule. Yindlela elungileyo yokugqitha kwi-ewe okanye hayi kwiimpendulo ezikruqulayo.
Leliphi ixesha elifanelekileyo lokusebenzisa imibuzo engahleliwe? Zisebenzise xa uqaphela ukuba buthathaka kwincoko yakho.
Umzekelo, ukuba unentombazana entsha ongathanda ukuyazi ngcono, kwaye kukho ukuthula okungonwabisiyo okusongela ukubulala incoko yakho, buza into ngaphandle kweblues-engadibaniyo kwaphela nento obukade uthetha ngayo okanye ukude inxulumene nemeko ekuyo ngoku.
Ukwenza oku kuya kwenza ukuba imibuzo yakho engahleliwe ibe nefuthe ngakumbi kuye njengoko kunokwenzeka ukuba athathwe kwaye azibuze ukuba kuqhubeka ntoni engqondweni yakho. Njengokuba ecinga ngempendulo yombuzo wakho, uyakuchukunyiswa nakubuntu bakho kwaye afune ukukwazi nangakumbi!
Nayi eminye imibuzo emyoli eyonwabisayo yokwazi umntu ngcono. Baza kukunceda xa ujonge ukuqala kakuhle incoko.
13. Yintoni eyona nto iphosakeleyo ngabantu ngawe?
Lo mbuzo ongacwangciswanga umba kwiingcinga eziphosakeleyo eziqhelekileyo malunga nomntu obuzayo. Uninzi lwabantu alufumani thuba lokuzichaza, yiyo loo nto benokuthi basebenzise impendulo yalo mbuzo ukucoca umoya. Lo mbuzo ungacwangciswanga unokufumana ukuba ufumanise izinto ezinzulu ngokwenene malunga nomnye umntu.
14. Zeziphi ezinye zeyona migca ilungileyo yokuchola owakha wayiva okanye wayisebenzisa?
Ukuba uthetha nomfana, babuze imigca abayisebenzisileyo. Ukuba uyazi intombazana, babuze enye abayivileyo kwaye abanakukunceda kodwa bacinge, Isiqhwala!
Lo mbuzo ungacwangciswanga unokuzisa iimpendulo ezonwabisa kakhulu eziza kunihleka nobabini!
Nantsi into, xa umntu ekhululeka ngokwaneleyo ukuba ahleke iintliziyo zabo xa bechitha ixesha nawe, baya kufuna ukufumana imvakalelo eyonwabisayo kaninzi. Le yindlela eqinisekileyo yomlilo yokubenza bakhe ubudlelwane obomeleleyo kunye nawe kwaye babelane ngezinye izinto malunga nokuhlala kunye nawe.
Ngaphandle kokunikeza iimpendulo ezihlekisayo, le yindlela entle yokwazi ukuba yintoni ejika intombazana, kunye nokuqonda okuthile malunga nokuthandana komfana.
15. Sesiphi esona siqhulo sowakha wasiva?
Njengokungahleliwe njengoko oku kubonakala ngathi, yindlela entle kwaye elula yokuqalisa incoko.
Intlekisa, ngakumbi eyonwatyelwa ngomnye umntu kwaye ade ayixelele ngokwabo, yindlela elungileyo yokususa uxinzelelo kunye nobunzima obuhlala buhamba neencoko ezinzulu.
16. Sisiphi isakhono onqwenela ukubusebenzisa nokuba sithatha ngonaphakade?
Buza lo mbuzo xa ufuna ukwazi malunga nomdla womntu, ngakumbi ukuba ucinga ukuba banamathele ekwenzeni into abangayithandiyo.
Awunakho ukubanika into abafuna ukuyenza ngokwenyani, kodwa ukubayekela bathethe ngayo yeyona ndlela ibalaseleyo yokuvumela ukuba bangene nzulu kulangazelelo lwabo lokwenyani kunye nemidla yabo.
Kodwa kuba ufuna ukuba lo ube ngumbuzo ongacwangciswanga, kungcono ungazisi wona xa besiva ukuba abanalwazi okanye abanampumelelo kwizenzo zabo njengoko oko kunokubenza bazive bengonelisekanga.
Liliphi elona xesha lilungileyo lokubuza lo mbuzo? Nangaliphi na ixesha ngexesha lencoko engaqhelekanga ilungile. Kodwa ngenxa yesiphumo esimangalisayo, cinga ngokuzisa xa omnye umntu ekulungele ukuthetha malunga nento alunge ngayo.
Lo ngumbuzo omkhulu onokuthi ujike iintetho ezincinci zibe ziincoko zokwenyani.
Imibuzo yeBhonasi engaqhelekanga yokuNazi uMntu
Ugqibele nini ukulila? (Musa ukubuza indoda le, ngaphandle kokuba ungumfazi!)
Ukuba ubunesigidi seedola kanye ngalo mzuzu, ungayisebenzisa njani?
Nguwuphi umbuzo omnye onokuwubuza umntu omthandayo ukuba uqinisekile ukuba uza kufumana impendulo ethembekileyo?
Uhlobo lohlobo: Ukwazi umntu ngandlela zimbini. Kuya kufuneka ufudumale kwaye umeme xa ufuna ukuba omnye umntu azive ekhululekile ukuba angabelana ngolwazi lwabo nawe.
Ngaba ungabuza imibuzo
Yintoni eyenza ukuba umbuzo ube mnandi xa kufuneka ucinge nzulu ukuze uwuphendule?
Nantsi into, umbuzo ungonwaba ngempendulo ekhawulezayo kunye ne-snappy, kodwa iya kukuxelela lukhulu ngomnye umntu.
Kulapho imibuzo onokuthi uyithande inokuba luncedo.
Leliphi elona xesha lilungileyo lokusebenzisa olu hlobo lwemibuzo emnandi ukuze wazi umntu othile?
Ngenxa yokuba le seti yemibuzo ithatha ngaphezulu kwefomathi yemibuzo, zilungile xa umoya udlala. Umzekelo, ungazisebenzisa xa ufuna ukudlala umbuzo omncinci kwaye uphendule umdlalo okanye into efanayo.
Nazi ezi-4 ungathanda imibuzo emyoli ukuze wazi umntu ngcono.
17. Ngaba ungathanda ukwenza imali encinci ngokwenza umsebenzi owuthandayo okanye ngaphezulu wokwenza into oyithiyileyo?
Ngaba ufuna ukwazi umbono womntu malunga nemali? Buza lo mbuzo omnandi.
Kumnandi kwaye kunembeko kunokuba ubuze ngokuthe ngqo ukuba umntu uyayithanda imali ngaphezulu kokuthanda kwakhe (okunokungahloniphi kunye nokuthuka).
Impendulo yalo mbuzo iza kukuxelela ukuba baya kulandela inkanuko yabo okanye bakhethe nje ukuziphilisa ngokuhlawula okufanelekileyo.
Gcina ukhumbula ukuba awuzami kubagweba. Endaweni yoko uzama ukubazi ngcono.
18. Ungathanda uku-odola okanye upheke?
Lo mbuzo awunyanzelekanga ukuba ufune ukwazi ukuba umntu unazo na izakhono zokupheka (nangona, yindlela elungileyo yokufumanisa ukuba umntu uyakonwabela na ukupheka).
Endaweni yoko, ungawusebenzisa lo mbuzo ukwazi:
Ukuba baneshedyuli exakekileyo eshiya ixesha elininzi lokulungiselela ukutya kwabo
Ukuba banalo lonke ixesha ehlabathini ukupheka ukutya kwabo
Indawo yokutyela ayithandayo yomntu (ukuba bakhetha uku-odola ukutya)
Isitya abasithandayo (ukuba bakhetha ukupheka)
Ukutya kwabo (nokuba batya ukutya okungenamsoco okanye impilo)
Ewe kunjalo, kuya kufuneka ubuze imibuzo elandelayo ukuze ufumane ezi nkcukacha.
19. Ngaba ukhetha ukuphulukana nokubona okanye ukuthanda ukuthanda?
Kulungile, ndiyazi ukuba bendikhankanyile ngaphambili ukuba le mibuzo ihlala iphendula ngokukhawuleza, kodwa le inokwenza ukuba omnye umntu anqumame kwaye acinge ithutyana ngaphambi kokuba aphendule.
Impendulo yalo mbuzo iya kukwenza uyazi ukuba umntu lo unomdla ngakumbi okanye utyekele ekuxhomekekeni ngakumbi kwiimvakalelo zabo.
Kodwa njengayo yonke eminye imibuzo kolu luhlu, akukho ndlela yakufikelela kwisigqibo esiphathekayo malunga nobuntu bomntu ngokubuza nje umbuzo omnye. Kwakhona, ayisiyonzululwazi ngqo, kodwa inokukunika ulwazi oluncedo.
20. Ngaba ungakhetha ukushiywa wedwa xa ukhathazekile, okanye uthanda umntu okuthuthuzela?
Lo mbuzo uhlala uhlangana nempendulo ekulungeleyo, uwenze uvele njengombuzo ogqityiweyo. Ngesi sizathu, kungcono ukuba ube neminye imibuzo oza kuyilandela.
Khawucinge ukuba ngowuphi umbuzo olandelwayo olula?
Yiyo leyo. A elula kutheni ungagcina incoko iqhubeka.
Abantwana basebenzisa lo mbuzo kakhulu.
Nokuba yeyiphi na impendulo umntu ofuna ukuyazi ayinike, ukulandela ngokulula kutheni unokubenza bambe nzulu kwaye bazityhile ngakumbi kuwe.
Ke, ukuba bathe bakhetha ukushiywa bodwa, buza ukuba kutheni. Kwaye ukuba bathi bayathanda umntu ukubathuthuzela, phinda ubuze ukuba kutheni. Kodwa ungayisebenzisi ngendlela abantwana abenza ngayo. Banokufumana imithambo yabantu abadala ngokubuza nje ukuba kutheni ngokungapheliyo!
Uhlobo lohlobo: Kwiimeko ezininzi, ukuphendula umbuzo ngokwakho kunokukhuthaza omnye umntu ukuba akunike impendulo oyifunayo. Umzekelo, ungathi, ndiyakuthanda ukuya kwipaki yamanzi ekufuphi ngeentsuku zam zasimahla. Ukudlala emanzini kundenza ndizive ndiphila kwaye kundidibanisa nomntwana wam wangaphakathi! Kuthekani ngawe, yeyiphi indlela oyithandayo yokuchitha usuku lwakho?
Iingcebiso zokukhetha owona mbuzo wokuzonwabisa ufanelekileyo
Umnyama nomhlophe ugquma iitattoos
Sukuba nexhala xa ufumanisa ukuba kuyadideka okanye kuyothusa ukukhetha umbuzo ofanelekileyo kwimeko yakho. Nazi ezinye iingcebiso zokukunceda ukhethe imibuzo efanelekileyo yolonwabo ukuze wazi umntu ngayo nayiphi na imeko.
Uzama ukwazi Ngani Ngakumbi?
Le yeyona nto iphambili kwaye ibaluleke kakhulu xa ucinga ngemibuzo emnandi yokwazi umntu othile.
Ngubani kanye kanye ofuna ngokwenene ukumazi? Ngaba uzama ukwazi ngakumbi malunga nentombazana oyithandayo kwaye unethemba lokuthandana, okanye umntu ocinga ukuba uya kuba ngumhlobo omkhulu ongenazintambo?
Imibuzo yakho iya kuxhomekeka ekubeni ungubani na umntu kunye nolwalathiso onethemba lokuluqhubela kubudlelwane- abahlobo abalungileyo, umntu osebenza naye onokuthenjwa, owesibini, okanye umthandi.
Ukuba ukunye nabanye abahlobo kwindawo eqhelekileyo (njengepati, umzekelo), kungcono ukhethe umbuzo okhululekileyo kwaye ngekhe ubangele iintloni komnye umntu nokuba umntu wesithathu uyeva impendulo yabo.
Umzekelo, ungababuza nayiphi na imibuzo ongathanda ukuyibuza.
Kodwa ngokuqinisekileyo akufuneki ubuze intombazana ukuba luyintoni na ukonwaba kwakhe xa kukho abanye abantu abakufutshane. Ayisiyo indlela yokuphatha umfazi esidlangalaleni.
Kungcono ukugcina loo mibuzo kunye neminye imibuzo enzulu yobuqu xa uwedwa kunye nomnye umntu.
Thetha ngezinto ozithandayo
Khetha isihloko okonwabela kakhulu ukuthetha ngaso, kwaye ubuze imibuzo malunga naso. Into kukuba, omnye umntu uya kukubuza umbuzo ofanayo okanye into efanayo, naye. Uya kukhawuleza ukunika impendulo ukuba yinto othanda ukuyithetha kuba unomdla kwisihloko.
Ngaphandle koko, uya kukhululeka ngakumbi xa ubuza imibuzo elandelayo xa uthetha ngezinto ozithandayo.
Khumbula ukuba ukwazi umntu kuhamba ngeendlela zombini. Awungekhe ubuze ukwazi umntu xa ufihla okanye ungabonisi mdla wokuphendula imibuzo yakhe.
Ke, ukuba kukho umntu ongathanda ukumazi ngcono, khetha abambalwa kolu luhlu kwaye ubabuze ngexesha lengxoxo yakho eqhelekileyo.
iiattoos zolwandle ezimnyama namhlophe
I-tattoo yentliziyo eyaphukileyo esifubeni
yeyiphi ihempe ehamba nejean emnyama
umnqamlezo ngamaphiko eekona tattoo
Amagqabantshintshi ngenwele ezimnyama eyindoda
iiTattoo zengalo esezantsi yabasetyhini